Outdoor Park - Zhengzhou Prodigy chivaraidzo CO, Ltd.
Negadziriso A Kunobudirira ONDERNEEMING
Prodigy Group inonyanya kupa mhinduro yakakwana kuti basa rako ibudirire kupaki yokuzvivaraidza. noruzivo vagadziri yedu dzinoshanda pamwe chikwata chako kuumba yakasiyana uye hunonakidza ruzivo vaenzi vako.
Pashure zvakazara kutaurirana zvose zvinoumba uye nechimwe, vagadziri edu kusika 3D shanduro pamwe azvino kwesayenzi mano kukuratidzai kutarisana mugumisiro yemberi chirongwa. Izvi simba nemaonero kunobatsira Mamaneja kuti chisarudzo chakanaka.
Chivaraidzo Equipment Supply
Prodigy Group acharonga kugadzira Vatasvi kwakavakirwa yako kusarudzwa magadzirirwo. Uyewo, midziyo customization inowanikwa kuonga chikwata uye kugadzirwa ano midziyo R & D Prodigy zvakasimba.
A unyanzvi mukoti chikwata anoenda nyika anoona uye dzinotarisira yakatarwa kwezvakanga Vatasvi, uye kukubatsira kudzidzisa vashandi kuti ishande uye kuramba midziyo zvakarurama, saka kuti vatengi ako anogona kufadzwa Vatasvi vakachengeteka uye mafaro.
Technical Runobatsira zvichagoverwa yakakodzera, kunyange vanobhururuka wevanamakanika kuti nyika yako kana zvakakodzera. Emergency runhare iri pedyo 24 / 7.Prodigy Group anopa vanotambudzika pagondobwe kupembedza kushandiswa mahara.
Prodigy Group Usati wakurukura zvinopa vanoshupika pagondobwe kupembedza kushandiswa mahara. Mushure wakurukura, isu achakupaiwo pamusoro 1000 kupembedza zvikamu kunotora Vatasvi kubasa kana zviri kunze chiito.